'मदन होइन, सक्छौं भने मात्र अमर लामाको हत्यारा पत्ता लगाएर देखाऊ' | Citizen Post News
२७ बर्ष भयो नेपालको सर्बाधिक प्रख्यात र नेपाली जनताको मन मस्तिकमा गडिएका नेता मदन भण्डारीको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएको । २०५० जेठ ३ गते दासढुङ्गामा भएको त्यो घटना, दुर्घटना थियो की सुनियोजित आज पनि रहस्यको गर्भमै रहस्यमय रहेको छ ।
जिप दुर्घटना पश्चात सिङ्गो एमाले पङ्तीले यो घटना दुर्घटना नभई हत्या भएको घोषणा गर्यो । शोकलाई शक्तीमा बदल्ने प्रण पनि लियो । यता आमजनता पनि दुर्घटना मान्न तयार थिएनन् ।
सडक आन्दोलन भए, देशको धन सम्पत्तिको नास गरियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, उनलाई पनि आरोप लगाइयो, र, सीआईए सबका सब आरोपित भए । थुप्रै छानविन समिति बने, प्रतिवेदनहरु पेश गरियो । हत्यारा पत्ता लगाउने कसम खाइयो ।
सिङ्गो एमाले नेतादेखि कार्यकर्ताहरुले त्यस जिप दुर्घटनामा बँचेका अमर लामालाई औंला ठडाए र उसलाई पार्टी सदस्यताबाट नै हटाउने निर्णय भयो । मुद्धा चलाइयो र ५ बर्ष जेल जीवन पनि विताए । तर किन, कसरी, कस्ले गरेको थिए त्यो हत्या ?
नत अनुसन्धानमा चाख दिइयो ? नत ती रहस्यहरु खोतल्न तदरुकता देखाए नेताहरुले ।
यदि त्यो हत्या नै थियो भने पनि अमर लामा त मात्र एक प्रयोग गरिएका खलपात्रमात्र थिए । योजनाकार त अरु नै थिए । हत्या पनि किन र के लागि गरिएको थियो, त्यो पनि यस रहस्यसँगै रहस्यकै कोखमा रह्यो ।
तर त्यही दुर्घटनालाई पसल थापेर नेताहरुले आफ्नो दुनो सोझाउने बाहेक रत्तिभर सिन्को भाँच्ने काम आजसम्म गरेनन् । नत उनीहरुले यसको रहस्य नै खुलाउन चाहे नत यसलाई महत्वनै दिए । दिए त मात्र बक्तव्य बाजी र ठूलाठूला भाषण । सायद योभन्दा बिक्ने कुनै नारा उनीहरुले देखेका थिएनन् राजनीतिमा ।
हुन पनि विधुवा भेषमा आजकी सम्मानित राष्ट्रपतिले सन्त, कर्मठ र सत्यबादी नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउन सफल हुनु भयो । नेपालकै सर्बाधिक लोकप्रिय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको हार मदन भण्डारीको अपराधी पत्ता लगाउनको लागिको जनमत थियो, नकी विधवा श्रीमतीप्रतिको सहानुभुती ।
मदन भण्डारीको यही मृत्युलाई मुख्य नारा बनाएको एमालेले २०५१ सालको मध्यावधी चुनावमा ठूलो पाटी बन्ने मौका पायो । यो मत एमालेप्रति भन्दा पनि मदन भण्डारीप्रतिको सम्मान थियो ।
साथै आशा र भरोेसा थियो-सायद मदन भण्डारीको हत्यारालाई दण्ड दिलाउनेछन् उनका सहपाठीहरुले ।
हुन पनि छोटो अबधी कै किन नहोस, नेपालमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार गठन पनि भयो । मनमहोन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनु भयो । रक्षामन्त्री माधब नेपाल, गृहमन्त्री केपी ओली शर्मा । कसले रोकेको थियो उहाँहरुलाई यसको छानविन गर्न, दोषी पत्ता लगाउन ?
आज हेरौं, राष्ट्रपति मदन भण्डारीकी श्रीमती, प्रधानमन्त्रीदेखि अत्यधिक बहुमतको सरकार । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अनी न्यायापालिका सबै कब्जामा छ । चाहादा २ घण्टामा विधेयक पास हुन्छ र जारी हुन्छ ।
कसले रोकेको थियो उहाँहरुलाई यसको छानविन गर्न, दोषी पत्ता लगाउन ?
दुई चोटी मात्र होइन यो २७ बर्षमा झण्डै दर्जनौ चोटी सत्ता सम्हालेको छ । नेपालका कम्युनिष्टहरुले खै त छानविन गरेको ? साच्चै उहाँहरुको चाहाना थियो अपराधी पत्ता लागाउन भने कम्तीमा केही त गर्न सकिन्थ्यो नि । सिन्को भाँच्ने काम गरेका छैनन् ।
आज मदन भण्डारीकै सिद्धान्त, फोटो र आर्दश बेचेर डबल नेकपाको नाममा उहाँहरु राजनीति गरिरहेका छन् । जब जब प्रत्येक बर्ष त्यो दुर्घटनाको दिन आउँछ बक्तव्यहरु आउँछन्, मौन धारण हुन्छ, हत्यारा पत्ता लगाउने प्रण हुन्छ । उहाँहरुको कथा र गाथा गाइन्छ बस् ।
यो पटक पनि एक होइन दूइ-दुई अध्यक्षको नाममा ३ पृष्ठ लामो बक्तव्य जारी गरियो । र भनियो हत्यारा पत्ता लगाउन निरन्तर लागीनेछ । अनि ति कार्यक्रर्ताहरु नेताको बक्तव्यको कागजको अगाडि मौनधारण गर्ने र फुलका गुच्छा चढाउने बाहेक निरिह केही गर्न सक्दैनन् ।
दासढुङ्गा दुर्घटनाको रहस्यकै विच १० बर्षपछि उक्त घटनाका एकमात्र साक्षि अमर लामाको पनि गोली हानी हत्या गरियो । मदन-आश्रितको घटना त रहस्य मै रह्यो त्यो हत्या थियो की मात्र दुर्घटना ।
त्यो कि अमर लामालाई थाहा थियो कि भगवानलाई ।
तर अमर लामाको त हत्या थियो । दिनदाहाडै अपहरण शैलीमा किर्तिपुरमा लगेर फिल्मीशैलीमा हत्या गरेका ती विचरा अंमर लामा, जो मदन-आश्रित रहस्यमय दुर्घटनाका एकमात्र साक्षी थिए ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, महामहिम राष्ट्रपतिज्यू आज तपाईहरुसँग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अनि न्यायापालिका सबै कब्जामा छ, प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ । कृपया गरेर यस अमर लामा हत्या काण्डको अपराधीलाई मात्र जनताको कठघरामा उभ्याएर देखाउनुहोस् !
नत्र यो गोहीको आँसु चुहाने राजनीति छोड्नुस् । इमान्दारीका साथ आमजनता, कार्यकर्तासँग माफी माग्नुस् र यो रहस्यलाई कार्यकर्ताको मनोभावनासँग खेल्ने र मागी खाने भाँडो नबनाउनुहोस् ।
लेखकः अधिवक्ता एवम् मानवअधिकारकर्मी हुन् ।
चिर्पट प्रहार गरी सबैको हत्या प्रयास, हजुरआमाको मृत्यु, नाती समातिए
२०७७ मंसिर ८ गते २२:४७